Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo dhagax dhigay Xaafad Cusub oo laga dhisayo Magaalada kismaayo (sawiro) – Radio Daljir
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo dhagax dhigay Xaafad Cusub oo laga dhisayo Magaalada kismaayo (sawiro)
Janaayo 25, 2018 11:32 b 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha Xaafad Cusub oo laga hirgalinayo Magaalada Kismaayo.
Xaafadan oo loo bixyay Bilan ayaa ka koobnan doonanta guryo caadi ah oo la dago iyo Suuqyo goobo Waxbarasho iyo Adeegyada kale ee muhiimka u ah deegaanka.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in Xaafadan ay qayb ka qaadanayso dib u dhiska Magaalada iyo koboceeda isagoo ugu baaqay qurba joogtu in ay dalka maalgashadaan.
” Xaafadan oo kale Qurba joogta dibada kasoo laabanaysa haka faa’iidaystaan oo haku daydaan dib u dhiska dalku inaga ayuu ina sugayaa” ayuu yiri Madaxweynahu.
Cid walba oo dhismaha Xaafadan ka qayb qaadanaysa ayuu Madaxweynahu u mahad celiyay isagoo hoosta ka xariiqay in aysan jirin wax ka wanaagsan in dalka la maalgashado oo ah hanti raasamaal ah.
Dowladda Shiinaha oo Gargaar Caafimaad ku wareejisay dowladda Soomaaliya (dhegayso)